Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2022 | web ပေါ်မှာ
Mis en place pour éviter les licenciements résultant de la baisse d’activité liée à l’épidémie du Covid-19, le dispositif d’activité partielle est prolongé dans les mêmes conditions pour les entreprises soumises à des restrictions sanitaires ou ayant subi une forte baisse de chiffre d’affaires. Les salariés de ces entreprises continuent de percevoir une indemnité égale à 84 % du salaire net jusqu’au 28 février 2022. Deux décrets parus au တရားဝင်ဂျာနယ် le 29 janvier 2022 prolongent les taux d’allocation versée aux entreprises et aux salariés.
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလုပ်လက်မဲ့- ထိခိုက်မှုအများဆုံးကဏ္ဍများရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် အဘယ်ပြောင်းလဲမှုများ ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 2022Tranquillus
ဖတ်ရန် အလုပ်သင်စာချုပ်များ - ၂၀၂၁ စာသင်နှစ်အစတွင်ထောက်ပံ့မှုအဆင့်ကျဆင်းမည်မဟုတ်ပါ
အောက်ပါအခကြေးငွေဖြင့် အားလပ်ရက် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အနေအထားကို သူတို့ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
ထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောအခြေအနေများ - သင်၏ ၀ န်ထမ်းသည်အမှားအယွင်းရှိလျှင်ပင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသလား။
လုပ်ခအပါအ ၀ င်၊